रेखालाई दबाब ?
प्रकाशित : आइतबार, साउन ०४, २०७७१२:०७
गसिप । रेखा थापा उद्योगमा चलिरहेका विवादभन्दा पर छिन्। सधैँ विवादमा आउने उनलाई यो पालि अरूले मौकै दिएका छैनन्। त्यसैले उनी हरेक दिन फेसबुकमा ज्ञानगुनका कुरा राख्छिन्। त्यसबाहेक ज्यान घटाउनमा उनको बडो लगाव देखिएको छ। दिन बिराएर शारीरिक कसरत गरिरहेको भिडियो सार्वजनिक गर्न थालेकी छिन्।
पछिल्ला केही फिल्ममा रेखाको तौललाई लिएर आलोचना भएको थियो। ‘रामप्यारी’, ‘रुद्रप्रिया’ ‘पलाँस’, ‘डायरी’ आदि फिल्ममा उनी मोटी देखिएकी थिइन्। झन् बीचमा फिल्म नगरेपछि त तौल राम्रै बढेको थियो। तर, केही समययता फिटनेसमा ध्यान दिन थालेकी उनले छोटो समयमै २० केजी तौल घटाइसकेकी छिन्।
रेखाको यो तयारी आउँदो फिल्मका लागि पनि हो। स्थिति अनुकूल रहे भदौबाट फ्लोरमा जाने उनको तयारी छ। बढेको ज्यान त अभ्यास गरेर घटाइन्, तर रेखामाथि घट्दै गएको क्रेज बढाउने दबाब पनि छ। अब त्यो चाहिँ कसरी बढाउलिन् ? (सम्पूर्ण साप्ताहिकबाट साभार)
मुण्डनपछि सुरक्षा (फोटो फिचर)
नयाँ फिल्ममा सलमान र अनुष्काको जोडी ?
किन बनेन ‘तेरे नाम’ को सिक्वेल ?